Breeki aka maka Windows: Olee otú Jiri breeki aka na Windows
> Resource> Windows> breeki aka maka Windows: Iji breeki aka na Windows
Breeki aka maka Windows: Iji breeki aka na Windows
Breeki aka bụ a multiplatform na-emeghe iyi video transcoder (DVD video Ntụgharị), maka MacOS X, Linux na Windows, na kpam kpam free. Na breeki aka, i nwere ike transcode ọ bụla DVD, video ka MP4 (M4V) ma ọ bụ MKV faịlụ Ọkpụkpọ na MPEG-4, H.264, ma ọ bụ Theora koodu.
N'okpuru ebe bụ breeki aka nkuzi iji breeki aka maka Windows: Ohere 7, Vista, XP na 2000 na-akwado.
Ị nwere ike Ọzọkwa wụnye Microsoft NET Okpokoro 3,5 SP1. Na mara na nke a ga-arụnyere ọbụna ma ọ bụrụ .NET version 4 arụnyere n'ihi version 4 bụghị azu azu dakọtara.
Breeki aka Tutorial Nzọụkwụ 1: Họrọ a DVD / Video Isi Iyi
Na mbụ ihe mbụ, ibudata ma wụnye breeki aka maka Windows. Mgbe ẹkedori breeki aka, pịa "Isi Iyi" button n'elu, ị nwetara atọ nhọrọ:
Video File: Jiri a nhọrọ iji tọghata a video faịlụ, dịka ọmụmaatụ, si WMV ka MKV.
Nchekwa: Jiri a nhọrọ na họrọ a DVD / Blu-ray Video_ts nchekwa na diski ike gị.
DVD Drive Option: nanị dị ma ọ bụrụ na breeki aka na-achọpụta rụọ a DVD nkiri na gị mbanye.
Họrọ a isi iyi na ozugbo dị, ị nwetara a ndepụta nke Aha na isi iyi, wee họrọ onye ị chọrọ encode. Isi nkiri na-emekarị nwere ndị fọdụrụ n'ezinụlọ oge.
Breeki aka Tutorial Nzọụkwụ 2: Mee mmepụta Ntọala
Ihe mbụ bụ họrọ mmepụta ebe. Nanị pịa "ịchọgharị" button ma họrọ a nchekwa na diski ike gị.
Nke abuo, họrọ a preset si preset ndepụta na nri. Ọbụna na ị chọrọ iji hazie ihe parameters, ị na-atụ aro na-ahọrọ a ezigbo preset na-amalite na-agbanwe site n'ebe ahụ. Dị ka banyere ndị presets, "nkịtị" na "High Profaịlụ" dị mma nke na-ekiri na kọmputa gị ma ọ bụ TV. "Universal" nwere ike ịbụ mma maka gị obere ngwaọrụ.
Breeki aka Tutorial Nzọụkwụ 3: Malite converting
Ọ bụ oge na pịa "Malite" bọtịnụ iji malite converting video si DVD ma ọ bụ nanị converting video. Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ videos iji tọghata, nnọọ pịa "Tinye ka kwụ n'ahịrị" bọtịnụ kwụ n'ahịrị ndị a na-amalite na ọrụ site na "encode kwụ n'ahịrị" dialog.
Breeki aka maka Windows Atụmatụ:
1.Handbrake nwere ike ọ bụghị ugbu tọghatara niile videos zụrụ iTunes ma ọ bụ ịchọta na DVD ma ọ bụ Blu-Ray discs. Ọ bụrụ na ị na-ada iji tọghata ha, Video Ntụgharị nwere ike inwe ma nke a aga-eme mfe mere.
2.The ngbanwe oge ga-a nkeji ole na ole ọtụtụ awa dabere na ogologo nke video, ngwaike na gị na PC na ntọala gị breeki aka.
Roxio Popcorn Ntụgharị-adịghị arụ ọrụ? Gbalịa Ya Alternative ugbu a
Top 10 Windows 10 gburugburu maka Windows 7